merolagani - कस्तो छ आगामी डिसेम्बरभित्रै नेपाल आउने टोयोटा राइज एसयूभी ? यस्तो छ मूल्य
कस्तो छ आगामी डिसेम्बरभित्रै नेपाल आउने टोयोटा राइज एसयूभी ? यस्तो छ मूल्य
Nov 20, 2021 04:12 PM Merolagani
१४९८ सीसी क्षमताको यो गाडी १.२ लिटर इन्जिन र १.० लिटर टर्बो इन्जिनयुक्त राइज नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
जसमा १.२ लिटर इन्जिनले ८८.३७ पिएसमा ६ हजार आरपीएम पावर जेनेरेट गर्छ भने ११३ एनएममा ४५०० आरपीएम टर्क उत्पादन गर्छ । त्यसैगरी १.० लिटर टर्बो इन्जिनयुक्त राइजले ९८ पीएसमा ६००० आरपीएम र १४० एनएममा ४००० आरपीएम टर्क जेनेरेट गर्छ ।